Dagaal culus oo ka qarxay degmada Afgooye +Al-shabaab oo gudaha u galay | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Dagaal culus oo ka qarxay degmada Afgooye +Al-shabaab oo gudaha u galay
Dagaalo aad u culus oo ayaa goor dhow ka qarxay gudaha degmada Afgooye ee gobolka Sh/hoose kaasoo dhexmaraya ciidamada dowlada Somalia iyo xoogaga Al-shabaab.
Wararka ayaa sheegaya in dagaalkan oo bilowday salaadii casir ka dib markii xoogag taabacsan Al-shabaab ay dhowr jiho ka soo galeen degmadaas, waxaana dagaalka ka hor la maqay qarax aad u weyn oo gilgilay degmadaas.
Goob joogayaal ayaa sheegaya in xoogaga Al-shabaab ay qabsadeen qeybo ka mid ah degmada Afgooye oo uu ku jiro suuqa ganacsiga degmadaas iyo qeybo kale oo ka tirsan bartamaha degmada, iyadoo dagaalku xoogiisu ka socdo halka loo yaqaano Mukayga.
Ganacsiga & socodka dadka iyo gaadiidka degmada Afgooye ayaa gebi ahan joogsaday waxaana gudaha iyo hareeraha degmadaas laga maqlayaa rasaas aad u xoogan iyo qaraxyo waaweyn lama oga illaa hadda khasaaraha ka dhashay.
Shacabka degaanka ayaa sheegay in dagaalka ka hor ay maqleen qarax aad u weyn oo u muuqday mid ismiidaamin ah, ka dibna ay afarta jiho ee degmadas ka bilaabatay rasaas aad u xoogan, waxaana cakiran xaalada degmadaas.
Wararka qaar ayaa sheegaya in qaraxan loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo lagu weeraray saldhig ay degmadaas ku leeyihiin ciidamada Burundi ee AMISOM ka tirsan iyo kuwa dowlada Somalia.